निर्वाचनमा उम्मेदवारमार्फत २३ अर्ब परिचालन हुँदै, ४३ अर्बको कारोबार : सरकारमार्फत २० अर्ब खर्च – Everest Dainik – News from Nepal
निर्वाचनमा उम्मेदवारमार्फत २३ अर्ब परिचालन हुँदै, ४३ अर्बको कारोबार : सरकारमार्फत २० अर्ब खर्च
काठमाडौं, कात्तिक २१ । आसन्न प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा करिब ४३ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।
उम्मेदवार र राजनीतिक दलहरूले २३ अर्बभन्दा बढी र निर्वाचन आयोग र सरकारले २० अर्बभन्दा बढी खर्च गर्नेछन् । सरकार, निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले निर्वाचनमा गर्ने खर्चका कारण अर्थतन्त्र गतिशील हुनेछ ।
–निर्वाचन आयोगले गर्ने खर्चः १० अर्ब रुपैयाँ
–गृह मन्त्रालयलगायत अन्य सरकारी निकायले निर्वाचनकै लागि गर्ने खर्चः १० अर्ब
–प्रमुख दलका उम्मेदवारले केन्द्रमा प्रतिउम्मेदवार २ करोड र प्रदेशमा एक करोड रुपैयाँका दरले खर्च गर्दा कम्तीमाः २३ अर्ब १२ करोड
प्रतिनिधिसभाः उम्मेदवार २०६२
एक उम्मेदवारको खर्च सीमाः २५ लाख
उम्मेदवारको कुल खर्चः ५ अर्ब १५ करोड
प्रदेश सभाः उम्मेदवार ३४४८
एक उम्मेदवारको खर्च सीमाः १५ लाख
उम्मेदवारको कुल खर्चः ५ अर्ब १७ करोड
निर्वाचन अर्थात् चन्दाको मौसम
एमाले संस्थागत स् एमालेले माधवकुमार नेपालको संयोजकत्वमा वामदेव गौतम, विष्णु पौडेल र सुरेन्द्र पाण्डे सम्मिलित सहयोग परिचालन समिति गठन गरेको छ । एमालेले पार्टीकै नाममा चन्दा उठाउने र त्यसबापत रसिद दिने गरेको व्यवसायीहरू बताउँछन् । चन्दा उठाउने अभियान व्यवस्थित बनाएकाले एमालेले अन्य पार्टीको तुलनामा बढी चन्दा उठाउने गरेको छ ।
कांग्रेसमा नेतापिच्छे स् कांग्रेसमा पार्टीभन्दा नेताहरूले बढी चन्दा उठाउँछन् । कांग्रेसका विभिन्न नेतालाई चन्दा दिनुपर्ने व्यवसायीको गुनासो छ । ‘कांग्रेसमा नेतापिच्छे फरकफरक हिसाब हुन्छ,’ एक व्यवसायीले भने । एमालेपछि सबैभन्दा धेरै चन्दा उठाउने पार्टी कांग्रेस हो ।
व्यवस्थित ढंगले चन्दा उठाउँदै माओवादी स् माओवादीका पनि नेतैपिच्छे चन्दा उठाउने गरेका थिए । तर, अहिले अलि व्यवस्थित गरेर पार्टीका नाममा उठाउन थालेको व्यवसायीको अनुभव छ ।
मधेस केन्द्रित दल मारवाडी व्यवसायीमा केन्द्रित
मधेस केन्द्रित दलहरूले खासगरी मारवाडी व्यवसायीसँग चन्दा उठाउने गरेका छन् । क्षेत्रीयताका आधारमा पनि उनीहरूको सम्बन्ध मारवाडी व्यवसायीसँग धेरै हुने हुनाले त्यस्तो हुने गरेको छ, पहाडीमूलका व्यवसायीकहाँ उनीहरू कमै पुग्छन् । ती दलहरूले विराटनगर, वीरगन्जलगायतका आर्थिक केन्द्रबाट बढी चन्दा उठाउने गरेका छन् ।
कसले बढी चन्दा दिन्छ ?
सबैभन्दा ठूलो व्यावसायिक घरानाले सबैभन्दा धेरै चन्दा दिन्छन् भन्ने आममनोविज्ञान छ । तर, त्यस्तो होइन । कमिसन एजेन्टहरू, ठेकेदार तथा ‘पावर ब्रोकर’का रूपमा विकसित भइरहेका व्यवसायीहरूले बढी चन्दा दिने गरेका छन् ।
कमिसन एजेन्ट, ठेकेदार तथा पावर ब्रोकर व्यवसायी नेताहरूकहाँ चन्दा बुझाउन आफैँ जान्छन् । भविष्यमा विभिन्न समयमा काम गराउनुपर्ने हुँदा उनीहरूले राजनीतिक दलका नेतालाई रिझाउने समयका रूपमा चुनावलाई लिने गर्छन् । तर, सामान्य हिसाबले उद्योग–व्यवसाय गर्नेसँग राजनीतिक दल तथा तिनका नेताहरू आफैं सहयोग माग्ने गर्छन् । भविष्यमा सम्बन्ध राखिरहनुपर्ने कारणले आफूले सकेको चन्दा दिने गरेको एक व्यवसायीले बताए ।
नेपालका ठूला व्यावसायिक घरानाले एकदेखि दुई करोडसम्म चन्दा दिने गरेको एक वरिष्ठ उद्यमीले बताए । तर, कमिसन एजेन्ट र ठेकेदारहरूले पाँच करोडदेखि १० करोडसम्म चन्दा बुझाउने गर्छन् । यसरी धेरै चन्दा बुझाउनेमा सधैँ राजनीतिक संरक्षण चाहिने तस्करहरू पनि पर्छन् । तर, कमिसन एजेन्टहरू र ठेकेदारहरूका लागि पाँच–सात करोड चन्दा दिनु सामान्य भएको एक व्यवसायी बताउँछन् ।
कसले कति चन्दा दियो वा दिने भन्ने विषयमा व्यवसायीहरूबीच सल्लाह हुँदैन । ‘यो नितान्त गोप्य कुरा भएकाले एक–आपसमा सेयर हुँदैन । तर, चन्दा उठाउन आउने नेताकै कारण अरूले कति दिए भनेर हिसाब लगाउन सजिलो हुन्छ,’ एक व्यवसायीले भने ।
चुनावमा कुल कति चन्दाको कारोबार हुन्छ ?
निर्वाचन आयोगले पाँच हजारभन्दा बढी रकमको चन्दा बैंकमार्फत लिनुपर्ने र रसिद पनि दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, त्यसको पालना कम मात्रै हुने गरेको छ । पारदर्शिता नहुने भएपछि चन्दाको कति कारोबार हुन्छ, त्यो भन्न सकिने स्थिति छैन।
राजनीतिक दलले चुनावमा खर्च गर्ने कुल रकममध्ये ६० देखि ७० प्रतिशत निजी क्षेत्रबाट उठाउने एक व्यवसायीको अनुमान छ । यो चुनावमा कुल २३ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमानका आधारमा निजी क्षेत्रबाट करिब १४ अर्ब रुपैयाँको योगदान हुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
सांसद बन्न कति चन्दा ?
राजनीतिमा चासो राख्ने मात्रै होइन, प्रत्यक्ष रूपमा सांसद नै बनेर राजनीतिमा संलग्न हुन चाहने व्यवसायीको संख्या पनि निकै ठूलो छ । यसपटक पनि करिब पाँच दर्जन साना–ठूला व्यवसायी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा उम्मेदवार बनेका छन् । तीमध्ये केही पहिलेदेखि नै राजनीतिमा थिए भने केही अहिले सांसद् बन्न लागेका छन् । यसरी सांसद बन्न चाहने व्यवसायीले पनि राजनीतिक दललाई ठूलो मात्रामा चन्दा बुझाउने गरेका छन् । सांसद बन्न तीनदेखि पाँच करोड रुपैयाँ चन्दाको कारोबार हुने गरेको यसअघि एकपटक सांसद बनिसकेका व्यवसायीले बताए । ‘यो पनि पार्टी हेरेर हुँदो रहेछ, ठूला पार्टीबाट सांसद पक्का हुने गरी समानुपातिक सूचीमा पर्न पाँच करोडसम्म खर्च गरेको पाइएको छ,’ उनले भने ।नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।